သူက သူ့ကို ဘယ်လို သတ်မှာလဲ | ZAYYA
ဆာတိုရီ ( Satori ) →
ဒါ့ကြောင့် အတွေးစဉ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ မကြိုးစားစေချင်ဘူး။ သူ့ကို သီးခြား ရပ်တန့် ပစ်ဖို့ နည်းလမ်း မရှိဘူး။ ကြိုးစား အားထုတ်လို့ မရပါဘူး။ အတွေးစဉ်ဟာ သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ့ဘာသာ ရပ်တန့် သွားနိုင်တာပဲ ရှိပါတယ်။
စိတ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာလုပ်မလဲ။ –
အဖြေက တစ်ခွန်းတည်း ရှိတယ်။ စောင့်ကြည့် နေရုံမျှ စောင့်ကြည့်နေ ပေးဖို့ပါ။ ဒါဟာ ဘာဝနာရဲ့ အစလည်း ဖြစ်သလို၊ အဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဝနာရဲ့ မူရင်း အဓိပ္ပာယ်ကိုက “စောင့်ကြည့်၊ သိမြင်မှု၊ သတိ” ပါ။ သတိထားရမှာက – ခင်ဗျား စိတ်သန္တာန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သမျှ ဘယ်အရာကိုမှ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း မရှိရဘူး။ ဖြစ်စဉ် မှန်သမျှ မပြတ် မလပ် စောင့်ကြည့်နေရုံ သက်သက် ပဲ။
ခင်ဗျားက ထပ် မေးမယ်။ စောင့်ကြည့် နေသူက ဘယ်သူလဲ။
အဲ့သလို စောင့်ကြည့်နေသူ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကြည့်နေမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျား သန္တာန် အတွင်း မှာ စောင့်ကြည့်နေသူ ဆိုတဲ့ အတွေးရယ် စောင့်ကြည့် ခံနေရတယ် ဆိုတဲ့ အတွေး ရယ် – စသဖြင့် အပိုင်းပိုင်း ကွဲပြား နေဦးမယ်။ အတွေးတစ်ခု က အတွေးတစ်ခုကို လိုက်လံ တိုက်ခိုက် နေဦးမယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရှေ့ အတွေး က နောက်အတွေး တွေ ကို သတ်ပစ်မယ်။ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ရစ်ပတ်ထပ် ဖြစ်နေမယ်။ အဲ့ဒါကိုကလည်း ရူးသွပ်လွန်း ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ခင်ဗျား တကယ် ရူးသွား ဖို့သာ ရှိတယ်။
တကယ် စင်စစ်က ခင်ဗျား တွေးနေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ “သိ” နေဖို့။ ဆိုလိုတာက ခင်ဗျား တွေးနေတဲ့ အတွေးစဉ်၊ ခင်ဗျား သန္တာန် အခု ပစ္စုပ္ပန် ခဏတိုင်း ဖြစ်ဖြစ်သမျှ စောင့်ကြည့် သိနေပေးဖို့။ အဲ့ဒါဟာ ထပ်တွေး နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျား အတွေးစဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကို စောင့်ကြည့်နေဖို့ ၊ သိမြင် နေဖို့ ( Witness ) သက်သက်ပါ။ အဲ့ဒီ စောင့်ကြည့်မှုမှာ – ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်အစဉ် တစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝ လွတ်လပ်မှု ပေးထားပါတယ်။ သူ အလိုဆန္ဒ ရှိ သလောက် မမေ့မလျော့ အသိရှိရှိနဲ့ စီးမျော နေနိုင်တယ်။ ခင်ဗျား ဘာ တစ်ခု မှ ဝင် မကွပ်ကဲဘူး။ ဝင် မထိန်းချုပ်ဘူး။ စောင့်ကြည့်နေရုံ၊ သိနေရုံမျှလေး ရှိပါတယ်။
စိတ် အစဉ် ဟာ မက္ကင်းနစ် စက်တစ်ခုသာ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ အလှပဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးပဲ။ သိပ္ပံပညာ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက် လာပါစေ – စိတ် နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူမယ့် အရာ အခြားတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်မှာ ရှုပ်ထွေး သလောက် စွမ်းအား အပြည့်အဝ ရှိတယ်။ စွမ်းရည် အပြည့်အဝ ရှိနေတယ်။ ခင်ဗျားက ဒါကို စောင့်ကြည့် နေရုံပဲ။ ဒီလို လှပတဲ့ စိတ်အစဉ်ကို သိမှတ် ပျော်ရွှင် နေမယ်။
ဒီအချိန်မှာ – ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်သန္တာန်ဟာ ခင်ဗျား အတွက် ရန်သူမဟုတ်ဘူး ဆိုတာလဲ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အကြောင်းက ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် ရန်သူ အနေနဲ့ ရှုမြင်နေပြီ ဆိုရင် ခင်ဗျား အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စောင့်ကြည့်မှုကို ဆက်ပြီး လုပ်လို့ မရတော့လို့ပဲ။
Let thoughts move in total freedom. And then bigger intervals will be coming. You will be blessed with small satoris. Sometimes minutes will pass and no thought will be there; there will be no traffic —atotal silence, undisturbed. When the bigger gaps come, you will not only have clarity to see into the world — with the bigger gaps you will haveanew clarity arising — you will be able to see into the inner world. With the first gaps you will see into the world: trees will be more green than they look right now.
You will be surrounded by an infinite music — the music of the spheres. You will be suddenly in the presence of God — ineffable, mysterious. Touching you although you can not grasp it. Within your reach and yet beyond. With the bigger gaps, the same will happen inside. God will not only be outside, you will be suddenly surprised — He is inside also. He is not only in the seen; He is in the seer also — within and without. By and by… But don’t get attached to that either. Attachment is the food for the mind to continue.
Non-attached witnessing is the way to stop it without any effort to stop it. And when you start enjoying those blissful moments, your capacity to retain them for longer periods arises. Finally, eventually, one day, you become master. Then when you want to think, you think; if thought is needed, you use it; if thought is not needed, you allow it to rest. Not that mind is simply no more there: mind is there, but you can use it or not use it. Now it is your decision.